Asian Traveler: ဒေါ်လာ အနွမ်းနဲ. မြန်မာ ဇာတ်လမ်း
မနေ. က ရန်ကုန်လေဆိပ် နိုင်ငံတကာ ဆိုက်ရောက် ခန်းမရှိ KBZ ဘဏ် Currency Exchange ကောင်တာတွင် ဒေါ်လာ ၁၀၀ တန် ၂ ရွက် ကို သွားရောင်းရာ ( ထုံးစံအတိုင်း ) ငွေစက္ကူ က ခါက်ရိုးကျိုး နေလို.ဆိုပြီး မယူပါ ။
" ဒေါ်လာအစစ်တွေပါ ၊ မယုံရင်စက်နဲ.စမ်းကြည်.ပါ ... ဂိုဒ်တွေဆိုတာ ဧည်.သည်က သဒ္ဒါကြေးပေး လို.ရ တဲ.ငွေကို နွမ်းတယ်ဆိုပြီး ပြန်လဲခိုင်းလို.မရလို. ယူပါ " လို. တောင်းပန်တိုးလျှိုးသော် ငြားလည်း
" ကျွန်တော် တို. KBZ ဘဏ်က မယူဘူးလို.မမှတ်ပါနဲ. ၊ ဒီငွေတွေကို ဗဟိုဘဏ် ကို အပ်တော့ ဗဟိုဘဏ်ကလက်မခံလို. မယူ ရဲတာပါ " လို. ၀န်ထမ်းတစ်ဦးက ခြေခြေ ငံငံ ရှင်းပြပါတယ် ။ ဒါဆိုရင်တော. ဒေါ်လာ အနွမ်း ကိစ္စ ဟာ ဘယ် သူ.ကြောင်. ခုထိ ပြ သနာ တစ်ရပ်လိုဖြစ်နေတယ် ဆိုတာသိသာလောက်ပါပြီ ။ ဒီပြသနာဟာ မြန်မာနိုင်ငံ အာဆီယံ ဥက္ကဌ လုပ်တဲ.အချိန်အထိ ရှိနေရင်တော့
" မြန်မာ.အရှက် ကမ္ဘာ မှာ ကွဲနေဦးမှာပါပဲ ခင်ဗျာ ...."
မြန်မာနိုင်ငံကို အစည်းအဝေးလာတက်မယ်. ကမ္ဘာ.ခေါ င်းဆောင်များလဲ ...ထောင်မလဲ သဲကော် ဒေါ်လာ အသစ်စက်စက်များကိုယူလာကြဖို. လို မှာ ဖြစ်ကြောင်း MTRV3၊. ကြေးမုံ၊ မြန်မာ.အလင်း ၊ New Light of Myanmar တို.ကနေ ကြိုတင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားသင်.ပါတယ် ။
ကိုညီ ( သရ၀ဏ်)